အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေများနေတဲ့လောကကြီးထဲ ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူဆိုတာ…❤️ – Trend.com.mm
Posted on August 21, 2018 by Noel
သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာ သင့်အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူက ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိတယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ?အကုန်လုံးကသင့်အပေါ်တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက ကံကောင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ တကယ်ကံကောင်းတာရော ဟုတ်ရဲ့ လား။ကိုယ်က ကိုယ့်အပေါ် ဂရုစိုက်ကြတယ်ထင်နေပေမဲ့ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေများလွန်းတဲ့လောကကြီးမှာ အရာအားလုံးစစ်မှန်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ဒီတော့ ဘယ်သူက ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ဂရုစိုက်လဲဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတော့ တွေးစရာမလိုပါဘူး။ဥပမာ သင်က ပန်းရောင်ဂါဝန်တစ်ထည်ကိုဝတ်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီအကျီနဲ့ဆို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပိုပြီးဝတယ်လို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ တစ်ယောက်က “ဟေး ဒီဂါဝန်နဲ့နင့်ကိုကြည့်ရတာ ၀တုတ်နေတာပဲ။သွားလဲလိုက်စမ်းပါ”လို့ပြောမယ်။နောက်တစ်ယောက်က “ဟေး အ၀ါရောင်ဂါဝန်လေး ထပ်ဝတ်ကြည့်လိုက်ပါလား?ဒီပန်းရောင်ကြီးက နင်နဲ့သိပ်မလိုက်ဘူး” ခြားနားချက်ကိုတွေ့ရဲ့လား? သင့်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ စကားလုံးရိုင်းစိုင်းမှုတွေ၊မလေးစားမှုတွေမပါပဲ သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ရိုးရိုးလေးပြောပြသွားတာပါပဲ။စကားလုံးရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ သင့်အပေါ်တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်။
သင်ပြောသမျှကို သေချာနားထောင်မယ်။အကြံဥာဏ်တွေပေးမယ်။ဘာလို့လဲ?သင်က သူတို့အတွက် အရေးပါလို့ပေါ့။ခံစားချက်တွေကို Sharing လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ တကယ်ကိုသိပ်ကောင်းပါတယ်။သင့်ခံစားချက်တွေကို အတူတူမျှဝေလို့ရတဲ့သူတွေအနားမှာရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို တန်ဖိုးထားပါ။
*သင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ကအစ မှတ်မိနေမယ်…
လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲမှာရှိရင် အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှက မှတ်ထားစရာမလိုပဲ အလိုလိုမှတ်မိနေတာပါ။သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေ၊သင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကို သင့်ကိုတကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပဲ သိတာပါ။
အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှ မိတ်ဆွေစစ်၊မိတ်ဆွေတုဆိုတာ ခွဲခြားရပိုလွယ်လာတာပါ။သင် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊သင်အားငယ်နေတဲ့အချိန်သင့်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေက သင့်ကိုတကယ်ဂရုစိုက်ချစ်ခင်ပေးတဲ့သူတွေပါပဲ။အဲ့ဒီတော့မှ သင့်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်ကများသင့်အတွက်တကယ်ဂရုစိုက်ပေးလဲဆိုတာ သေချာသိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်၊မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့က သင့်အတွက် နားခိုရာဖြစ်စေမှာပါ။တစ်ချို့တွေက သူတို့ဘယ်လောက်ခင်ခင် စိတ်ထဲမှာပဲထားတတ်တယ်။မဖော်ပြတတ်ဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျတော့ သင်အရေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ ခင်မင်မှုကို သက်သေပြတတ်ကြတတ်ပါတယ်။
ဒါက သင့်ကိုဘယ်သူတွေတကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါပဲ။အားလပ်ရက်တိုင်းမှာ သင်နဲ့အတူ လျှောက်လည်တယ်၊မုန့်တွေလျှောက်စားကြတယ်၊ခရီးတွေအတူထွက်ကြတယ်။မတွေ့ရတာကြာရင်တောင် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ စာလေးပို့ပြီးမေးတတ်ကြတယ်။ဘယ်သူကမှ
အတူမရှိချင်တဲ့သူ၊အတူအချိန်မဖြုန်းချင်တဲ့သူအတွက် အချိန်တွေမပေးထားပါဘူး။အိုခေနော်..ဒီတော့ သင်နဲ့အတူ အချိန်ကုန်ဆုံးရတာ ကြိုက်တဲ့သူက ဘယ်သူတွေလဲ?
တကယ်လို့များ ဒီလိုတွေဆန်းစစ်ကြည့်လို့ ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူဆိုတာ မရှိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်အပေါ်အလေးမထားတဲ့သူတွေကြောင့် ၀မ်းမနည်းပါနဲ့။အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသာ တိုးပြီးတန်ဖိုးထားပါ။တစ်ခါတစ်လေကျ ကိုယ်မထင်ထားတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ဂရုစိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်လေ။အပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးထက် ကိုယ့်ကိုအလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိရင်ကို ဘ၀မှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ အားအင်တွေလုံလောက်နေပါပြီ။
ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို တန်ဖိုးထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ❤
သငျ့အနားမှာရှိနတေဲ့သူတှထေဲမှာ သငျ့အပျေါ တကယျဂရုစိုကျတဲ့သူက ဘယျနှဈယောကျမြားရှိတယျလို့သငျထငျပါသလဲ?အကုနျလုံးကသငျ့အပျေါတကယျဂရုစိုကျတယျဆိုရငျတော့ ဒါက ကံကောငျးတာပါပဲ။ဒါပမေဲ့ တကယျကံကောငျးတာရော ဟုတျရဲ့ လား။ကိုယျက ကိုယျ့အပျေါ ဂရုစိုကျကွတယျထငျနပေမေဲ့ အပျေါယံဟနျဆောငျမှုတှမြေားလှနျးတဲ့လောကကွီးမှာ အရာအားလုံးစဈမှနျနဖေို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ဒီတော့ ဘယျသူက ကိုယျ့အပျေါတကယျဂရုစိုကျလဲဆိုတာ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ဆနျးစဈကွညျ့လိုကျပါ။
ရှညျရှညျဝေးဝေးတော့ တှေးစရာမလိုပါဘူး။ဥပမာ သငျက ပနျးရောငျဂါဝနျတဈထညျကိုဝတျကွညျ့တယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီအကြီနဲ့ဆို သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ပိုပွီးဝတယျလို့ထငျရတယျ။အဲ့ဒီတော့ တဈယောကျက “ဟေး ဒီဂါဝနျနဲ့နငျ့ကိုကွညျ့ရတာ ဝတုတျနတောပဲ။သှားလဲလိုကျစမျးပါ”လို့ပွောမယျ။နောကျတဈယောကျက “ဟေး အဝါရောငျဂါဝနျလေး ထပျဝတျကွညျ့လိုကျပါလား?ဒီပနျးရောငျကွီးက နငျနဲ့သိပျမလိုကျဘူး” ခွားနားခကျြကိုတှရေဲ့လား? သငျ့ကို တကယျဂရုစိုကျတယျဆိုတာ စကားလုံးရိုငျးစိုငျးမှုတှေ၊မလေးစားမှုတှမေပါပဲ သူတို့ရဲ့အမွငျကို ရိုးရိုးလေးပွောပွသှားတာပါပဲ။စကားလုံးရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျးပွောတာက စိတျပိုငျးဆိုငျရာကိုထိခိုကျစတေယျဆိုတာ သငျ့အပျေါတကယျဂရုစိုကျတဲ့သူတိုငျးသိပါတယျ။
သငျပွောသမြှကို သခြောနားထောငျမယျ။အကွံဉာဏျတှပေေးမယျ။ဘာလို့လဲ?သငျက သူတို့အတှကျ အရေးပါလို့ပေါ့။ခံစားခကျြတှကေို Sharing လုပျလို့ရတယျဆိုတာ တကယျကိုသိပျကောငျးပါတယျ။သငျ့ခံစားခကျြတှကေို အတူတူမြှဝလေို့ရတဲ့သူတှအေနားမှာရှိတယျဆိုရငျ သူတို့ကို တနျဖိုးထားပါ။
*သငျနဲ့ပတျသကျလို့ အသေးစိတျကအစ မှတျမိနမေယျ…
လူတဈယောကျကိုတကယျစိတျထဲမှာရှိရငျ အဲ့ဒီလူနဲ့ပတျသကျတာမှနျသမြှက မှတျထားစရာမလိုပဲ အလိုလိုမှတျမိနတောပါ။သငျကွိုကျတတျတဲ့အစားအစာတှေ၊သငျမကွိုကျဘူးဆိုတဲ့အရာတှကေို သငျ့ကိုတကယျဂရုစိုကျတယျဆိုတဲ့သူတှကေပဲ သိတာပါ။
အခကျအခဲတှကွေုံတှရေ့တဲ့အခါမှ မိတျဆှစေဈ၊မိတျဆှတေုဆိုတာ ခှဲခွားရပိုလှယျလာတာပါ။သငျ အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့အခြိနျ၊သငျအားငယျနတေဲ့အခြိနျသငျ့ဘေးနားမှာရှိနတေဲ့သူတှကေ သငျ့ကိုတကယျဂရုစိုကျခဈြခငျပေးတဲ့သူတှပေါပဲ။အဲ့ဒီတော့မှ သငျ့ဘေးနားမှာရှိနတေဲ့သူတှထေဲက ဘယျနှဈယောကျကမြားသငျ့အတှကျတကယျဂရုစိုကျပေးလဲဆိုတာ သခြောသိပါလိမျ့မယျ။စိတျဓာတျကနြတေဲ့အခြိနျ၊မလိုအပျတဲ့အရာတှကွေောငျ့စိတျရှုပျနရေတဲ့အခြိနျတှမှောသူတို့က သငျ့အတှကျ နားခိုရာဖွဈစမှောပါ။တဈခြို့တှကေ သူတို့ဘယျလောကျခငျခငျ စိတျထဲမှာပဲထားတတျတယျ။မဖျောပွတတျဘူး။အဲ့လိုလူမြိုးတှကေတြော့ သငျအရေးကွုံနတေဲ့အခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့ ခငျမငျမှုကို သကျသပွေတတျကွတတျပါတယျ။
ဒါက သငျ့ကိုဘယျသူတှတေကယျဂရုစိုကျတယျဆိုတာသိနိုငျတဲ့နညျးလမျးလေးပါပဲ။အားလပျရကျတိုငျးမှာ သငျနဲ့အတူ လြှောကျလညျတယျ၊မုနျ့တှလြှေောကျစားကွတယျ၊ခရီးတှအေတူထှကျကွတယျ။မတှရေ့တာကွာရငျတောငျ အဆငျပွရေဲ့လားလို့ စာလေးပို့ပွီးမေးတတျကွတယျ။ဘယျသူကမှ
အတူမရှိခငျြတဲ့သူ၊အတူအခြိနျမဖွုနျးခငျြတဲ့သူအတှကျ အခြိနျတှမေပေးထားပါဘူး။အိုခနေျော..ဒီတော့ သငျနဲ့အတူ အခြိနျကုနျဆုံးရတာ ကွိုကျတဲ့သူက ဘယျသူတှလေဲ?
တကယျလို့မြား ဒီလိုတှဆေနျးစဈကွညျ့လို့ ကိုယျ့အပျေါ တကယျဂရုစိုကျတဲ့သူဆိုတာ မရှိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ နညျးနညျးလေးပဲရှိတဲ့အခါ ကိုယျ့အပျေါအလေးမထားတဲ့သူတှကွေောငျ့ ဝမျးမနညျးပါနဲ့။အနားမှာရှိတဲ့လူတှကေိုသာ တိုးပွီးတနျဖိုးထားပါ။တဈခါတဈလကြေ ကိုယျမထငျထားတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့အပျေါတကယျဂရုစိုကျတာမြိုးတှရှေိတယျလေ။အပေါငျးအသငျးတှအေမြားကွီးထကျ ကိုယျ့ကိုအလေးထားတဲ့သူတဈယောကျရှိရငျကို ဘဝမှာရှငျသနျနထေိုငျဖို့ အားအငျတှလေုံလောကျနပေါပွီ။
ဘယျလိုအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ဘေးနားမှာရှိနတေဲ့သူတှကေို တနျဖိုးထားဖို့ မမပေ့ါနဲ့ ❤
ဆေးနွံထဲကနေ အပြီးပြတ်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Demi Lovato